မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်က မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ Bezzia
မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်က မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 11/05/2022 22:32 | Relaciones
Soulmate ၏ အယူအဆသည် လူတိုင်း တစ်သက်တာလုံး လိုချင်တောင့်တသော အရာဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် စိတ်ခံစားမှုနှင့် ချစ်ခင်တွယ်တာမှုအဆင့်တွင် ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်သော ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှု ရှိခြင်းသည် စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟု နားလည်လက်ခံထားသော အရာဖြစ်သည်။ လက်တွဲဖော်ကို သင့်အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်အောင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတိုင်းတွင် ဖြစ်မလာပါ။ ဖန်တီးထားသော လင့်ခ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြာလာသောအခါ ဤအချက်သည် အဓိကဖြစ်သည်။
နောက်ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။ သင့်လက်တွဲဖော်သည် သင့်အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်မဖြစ် သိရန် သော့တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်လက်တွဲဖော်သည် သင့်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း သိရန်သော့ချက်
စုံတွဲများသည် အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနိုင်သည့် သဲလွန်စများ သို့မဟုတ် လက္ခဏာများ ဆက်တိုက်ရှိပါသည်-
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို အခြေခံသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ထိုကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောတန်ဖိုးများ ရှိနေသည့် ခိုင်မာသောနှောင်ကြိုးကို ဖန်တီးပေးသည်။ ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှု၊ ဤအရာအားလုံးသည် ဆက်ဆံရေးတွင် ပျော်ရွှင်မှုခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ပိုမိုခိုင်ခံ့လာပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ အချိန်ကာလတစ်ခုကုန်ဆုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ မတူညီတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ သဘောထားကွဲလွဲခြင်းနဲ့ လုံးဝမကိုက်ညီပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်ရာထူးများကို အခါအားလျော်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆက်ဆံရေးအတွက် ကောင်းမွန်သည်။. လင်မယားနှစ်ယောက် ကြီးထွားသန်မာလာတဲ့အခါ ဒါက အရေးကြီးတယ်။
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် လက်ခံတဲ့အခါ စုံတွဲအတွင်း ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက တကယ့်အစစ်အမှန်ပါပဲ။ လက်တွဲဖော်သည် တစ်ဖက်လူ၏ခံစားချက်ကို ပျက်ပြားစေရန်ကြိုးစားခြင်းသည် မကောင်းပေ။ ဘယ်လိုတွေးသင့်လဲ ပြဌာန်းဖို့ကြိုးစားပါ။
သူတို့လုပ်မိတဲ့အမှားတွေအတွက် လင်မယားနှစ်ယောက်ကို အပြစ်တင်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ပြဿနာများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများကို လူနှစ်ဦးစလုံးက အချိန်တိုင်း အာရုံစိုက်နေသောအခါတွင် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည် စုံတွဲတစ်တွဲတွင် ရှိနေပါသည်။ လက်တွဲဖော်ကို စွဲမြဲစွာ အပြစ်တင်ခြင်းသည် အသုံးမဝင်ပါ။
လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ လင်မယားနှစ်ယောက်ကို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်အောင် လုပ်ရာမှာ အဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိသော ပါတီတိုင်းသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် လေးစားမှုရှိရမည်။ လွတ်လပ်သောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် သင့်အတွက် နေရာအလုံအလောက် ချန်ထားပါ။
ခင်မင်မှုရှိနေသော စုံတွဲတစ်တွဲသည် အဖွဲ့လိုက် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိသည်။. ပြဿနာများကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချကြသည်။
အချိန်တိုင်း ဦးစားပေးတာက စုံတွဲပါ။. အရေးကြီးတာက သူမကို လိုအပ်တဲ့အခါ ကူညီပေးဖို့နဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ မတူညီတဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ သူမတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကြောင်း သိထားဖို့ပါပဲ။
သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူ အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်များထားရှိခြင်းထက် ဤဘ၀တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ပါ။ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။
အတူတူ ရယ်မောနိုင်ခြင်းနှင့် တူညီသော ဝါသနာအမျိုးမျိုးကို ခံစားနိုင်ခြင်းသည် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကို ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပြည့်စေသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကို အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်စေတယ်။ တွဲပျော်ခြင်းသည် လူနှစ်ယောက်ကြားတွင် ကြေကွဲရခက်သော ဆက်ဆံရေးကို ဖန်တီးပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » Relaciones » မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်က မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Toxoplasmosis ကဘာလဲ၊ ကိုယ်ဝန်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။